Laanta Socdaalka oo joojisay ku celinta Giriiga | Somaliska
Laanta Socdaaka Sweden ayaa guud ahaanba joojisay ku celinta dadka magangalyo doonka ah dalka Giriiga. Go'aanka ayaa durbadiiba dhaqangalay ayadoo aysan Laanta Socdaalka dadka ku celin doonin Giriiga taasoo sabab looga dhigay heerka nolosha iyo amaanka ee wadanka Giriiga. Sidoo kale Laanta Socdaalka ayaa codsi u dirtay Maxkamada Socdaalke ee Sare in ay arintaan go'aankaan buuxa ka soo saarto. Horey ayaa dhowr wadan oo ay ka mid tahay Norway u joojiyeen in ay qaxootiga ku celiyaan Giriiga. Ayadoo xitaa Maxkamadaha Socdaalka ee magaalooyinka Malmö iyo Göteborg ay horey u joojiyeen. Arintaan ayaa ah mid farxad u leh Magangalyo doonta Soomaalida ee giriiga faraha looga soo qaaday. SVT.
Laanta Socdaalka oo joojisay ku celinta Giriiga
Laanta Socdaaka Sweden ayaa guud ahaanba joojisay ku celinta dadka magangalyo doonka ah dalka Giriiga. Go’aanka ayaa durbadiiba dhaqangalay ayadoo aysan Laanta Socdaalka dadka ku celin doonin Giriiga taasoo sabab looga dhigay heerka nolosha iyo amaanka ee wadanka Giriiga.
Sidoo kale Laanta Socdaalka ayaa codsi u dirtay Maxkamada Socdaalke ee Sare in ay arintaan go’aankaan buuxa ka soo saarto.
Horey ayaa dhowr wadan oo ay ka mid tahay Norway u joojiyeen in ay qaxootiga ku celiyaan Giriiga. Ayadoo xitaa Maxkamadaha Socdaalka ee magaalooyinka Malmö iyo Göteborg ay horey u joojiyeen.
Arintaan ayaa ah mid farxad u leh Magangalyo doonta Soomaalida ee giriiga faraha looga soo qaaday.